အစဉ်အဆက်အီတလီနိုင်ငံရာ၌ပထမဦးစွာရထားခရီးစဉ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အစဉ်အဆက်အီတလီနိုင်ငံရာ၌ပထမဦးစွာရထားခရီးစဉ်
အီတလီနိုင်ငံအချို့သောအံ့သြဖွယ်ရထားခရီးစဉ်များရှိပါတယ်. ဒါဟာလှပသောရထား၏နံပါတ်ရှိပြီး လက်ရာမြောက်သောဘူတာ တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံး, ဒါပေမယ့်ရှိရာပထမဦးဆုံးမီးရထားခရီးစဉ်ကိုအစဉ်အဆက်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် အီတလီ?
အစဉ်အဆက်အီတလီနိုင်ငံလုပ်ပထမရထားခရီးစဉ် – အဆိုပါအစ
အစဉ်အဆက်ထားကိုပထမဦးဆုံးမီးရထားခရီးစဉ် အီတလီ introduced railways was when Italy wasadivided ပြည်. ဒါဟာအီတလီနိုင်ငံစည်းလုံးပြီးနောက်တည်ဆဲမီးရထားလိုင်းများလင့်ထားသည်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခြို့သောအနှစ်ကိုယူ. အီတလီကတည်ဆောက်ခဲ့သောပထမဆုံးရထားလမ်းမှာထိုစဉ်ကဆိစ္စနှစ်နိုင်ငံ၏ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သောနပိုလီယန်မှ Portici လိုင်းဖြစ်သည်. အဆိုပါလိုင်းခဲ့သည် 7.25 ကီလိုမီတာရှည်လျားသော. အဆိုပါလိုင်းပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ် 3တတိယအကြိမ်မြောက် အောက်တိုဘာလတွင် 1839. ဒီအကြီး9ပထမဦးဆုံး "ခေတ်သစ်" အတွင်းစိတ်-မြို့လိုင်းလီဗာပူးလ်နှင့်မန်ချက်စတာမီးရထားခဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း.
ကနဦးလမ်းကြောင်းနှစ်ဆလမ်းကြောင်းကြီးက Portici မှာတော်ဝင်နန်းတော်မှ Naples အတွက် Corso Garibaldi ၏လက်ရှိ site မှအထဲသို့ပြေး ဝင်.. တော်ဝင်နန်းတော် နာမည်ကြီးတောင်ကို Vesuvius ၏ခွမှာ. ပြည်သူ့ပထမဦးဆုံးကဒီမှာအီတလီနိုင်ငံမှရထားခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်း, နှင့်ဤလိုင်းယခု Naples-Salerno မီးရထားလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသော.
အဆိုပါ Naples-Salerno မီးရထားလမ်းထဲမှာအဓိကမီးရထားလမ်းဖြစ်ပါသည် အီတလီရထားလမ်းကွန်ယက်ကို today and hasaplace in The First Train Trip Ever Made in Italy. ဒါဟာတောင်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံမှအဓိကပင်စည်အညီ link တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသော. အဆိုပါလိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကီလိုမီတာပထမဦးဆုံးမီးရထားလိုင်းဖြစ်ပါသည်. ပြည်သူ့ယခုအရှိဆုံးတဦးမှရထားကိုသုံးပါ လူသိများတဲ့နေရာများ,afamous coastal town called Amalfi in the region of Campania. ဒါဟာအံ့မခန်းကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်ပါသည်. ယင်းကြောင်းပြောဘေးကင်းလုံခြုံဒါဟာင် ရထားခရီး ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ရှိရဖို့အများကြီးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်. ကျောက်သလင်းရေကိုစဉ်းစားပါ, အချို့အဆင်းလှအဟောင်းနှင့်အသစ်ဗိသုကာနှင့်အကြားအဖြူသဲနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသော. သငျသညျ Naples ထံမှ Salerno ရန်သင့်မီးရထားခရီးစဉ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်ဖွစျလိမျ့မညျ, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် Amalfi သို့ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင့်အခြားစည်းရုံးနည်းလမ်းဖမ်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ.
ဒါကြောင့်ဘာ Naples-Portici လိုင်းမှဖြစ်ပျက်? ၏စိုက်ပျိုးရေးများ၏ဌာန တက္ကသိုလ် Naples Federico II ၏မှုကြောင့်တောင်ကို Vesuvius ရန်၎င်း၏လွယ်ကူစွာဤလိုင်း၏အဓိကအသုံးပြုသူဖြစ်ပါသည်. အီတလီမှာပထမဦးဆုံးမီးရထားခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းနေဆဲယနေ့တည်ရှိ.
ပထမဆုံးအီတလီရထားလမ်းကလမ်းခင်းပေးခဲ့တယ် ရထားခရီးသွား၏အနာဂတ် နိုင်ငံထဲမှာ. အလှဆုံးရထားခရီးအချို့မှာဒီမှာပါ. အစဉ်အဆက်အီတလီနိုင်ငံလုပ်ပထမဦးဆုံးမီးရထားခရီးစဉ်အပေါ်ကိုပြန်ရှာနေ, ကျနော်တို့ပေမယ့်အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီနြို. အဆိုပါရှုခင်းယခုပင်ဖြစ်၏ထို့နောက်အဖြစ်ပဲဖြစ်မည်အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်.
So now that you learned about The First Train Trip Ever Made in Italy, are you thinking of တစ်ဦးကရထားလက်မှတ် booking foraEuropean train trip? အဘယ်ကြောင့်မယူ3သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မိနစ်. ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှ Login စာအုပ်ရထား.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-first-train-trip-ever-made-in-italy%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed ကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း.
ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် travelitaly